Ny tsara indrindra famenoana famatsian-kitapo Ketchup - TopFillers
Ketchup famenoana milina
Home / Famonoana machinery / Ketchup famenoana milina
Famonoana machinery, Ketchup famenoana milina
Fitaovana NP-VF Ity famolahana famolavolana ity dia mety amin'ny famenoana ny ranon-drongony, toy ny crème, lotion, shampoo, saosy, tantely, ketchup, ary ranon-drongony hafa. Manam-pahefana amin'ny alalan'ny ordinatera (PLC), fanaraha-maso fanaraha-mony. Feno tanteraka ny endriny, famenoana ny fanamafisana, ny mari-pahaizana marina. Ny singa mifanentana sy lavorary, ny cylindrique ary ny fitaratra dia mora miala sy madio. Mety hifanaraka amin'ny fitambaran'ny mpanamboatra ihany koa izy io. Famoronana sy fampisehoana, manasongadina ny 1.Adopt an'ny orinasa SIEMENS (Siemens) orinasa orinasa SIEMENS (na Mitsubishi PLC) mba hahazoana antoka ny fahombiazan'ny rafitra. 2. Misafidiana herinaratra herinaratra, fanaraha-maso ny pneumatic, miaraka amin'ny fahombiazan'ny fiarovana. 3. Ny fototeny finday dia mamaritra ny vokatra alemana, miaraka amin'ny kalitao azo itokisana. 4.The leading ...
Semi-Automaitc Ketchup Filling Machine Ny seminera automatique fantsona famonoana dia natao hameno ny vokatra isan-karazany amin'ny vokatra azo avy amin'ny solika sy semi-likid. Ireo fampirimana dia azo ampiasaina betsaka amin'ny sakafo, sy ny simika, ny pharmaceutique ary ny faritra hafa. Amin'ny valizy samihafa, dia azo ampiasaina izy ireny mba hamenoana menaka, tantely, siropia, tavy paste, sokatra voatabia, ketchup, shampoo, menaka fanadiovana, akanjo gazo, savony savony, sns. Features 1. Ny famenoana volavolan-dalàna dia alaina amin'ny fampisehoana sy ny lozisia, izay manome fahafaham-po ny fanitsiana ary ahafahan'ny mpandraharaha mamaky ny volan'ny famenoana amin'ny fotoana mahamety izany. 2. Fomba fanondranana roa ho anao mba hisafidianana - 'Manual' sy 'Auto'. 3. Ny ampahany manan-danja rehetra dia natao ...
PLC voankazo manara-penitra manara-penitra PLC
Famatsiana milina fanondrahana milina fanondrahana milina fanondrahana solika / 200L
1L-5L automatique famoahana famonoana automatique
10-loham-boankazo misy tsiranoka mipoapo-drivotra ratsy fanondrahana